Shirkadda Apple oo qiratay in ay dhinto tayada taleefoonada iPhone - BBC News Somali
Shirkadda Apple oo qiratay in ay dhinto tayada taleefoonada iPhone
22 Disembar 2017
Arrintan ayaa soo shaacbaxday kadib markii qof macaamiisha ka mid ah uu shabakada Reddit kusoo qoray in uu ogaaday in taleefoonkiisa tayadiisa shaqo la dhimay, taana uu ku ogaaday kadib markii uu isticmaalay taleefoon kiisa la jaan ah.
Apple waxa ay sheegtay in sababta ay u dhintay tayada taleefoonka ay tahay maadaamaa batariga taleefoonka uu daciifayo muddo kadib, taasna aysan suurtogalinaynin in taleefoonka uu si xawaare sare ah u qabto adeegyadii lagu isticmaali jiray markii uu cusbaa.
Shirkadda Apple oo iPhone 7 soo bandhigeysa
Iibsiga taleefanka Iphone oo hoos u dhacay
Ma run baa in Nokia ay soo celinayso taleefankii 3310
Balse dadka qaar ayaa sheegay in sababta ay tahay in Apple ay dadka ku dhiirogalinayso in ay iibsadaan jaadadka cusub ee taleefoonada.
Batariyada ku jira taleefoonada iPhone ayaa laga sameeyaa curiyaha loo yaqaano Lithium ee birta fudud ah ee midabkeedu qalinka yahay, waxaana la sheegay in markii uu muddo joogo uu dabka ka dhoco sababtuna tahay marka la kaarikeynayo.
Xigashada Sawirka, IFIXIT
Waxaa hadda su'aalo laga qabaa in Apple ay ahayd in macaamiisha ay kusii wargaliso tayo dhimista ay samaysay.
Waxaase jirta in haddii qofka uu badalo batariga , oo uu galiyo mid cusub, in taleefoonka uu kusoo laabanayo tayadiisii hore. Chris Green oo ah qabiir xagga tijnoolajiyadda ayaa sheegay in ay ahayd in Apple ay daahfurnaan ka samayso qalabkeed.
Rory Cellan-Jones oo ka tirsan BBC-da ayaa sheegay in shirkadda Apple ay aad u xadidayso xogta ku saabsan qalabka ay soo saarto, wuxuuna intaas ku daray in la joogo xiligii shirkadda ay daacad noqon lahayd, dadkan uga digi lahayd wax kasta oo dhacaya.
TOOS Ninkii la tartamayay Museveni oo sheegay in noloshiisa halis ku jirto
Baaritaanka “hanjabaado loo geystay” gabadhii Muslimtay oo la soo gebagebeeyay
Nin loo xiray weerar hubeysan oo uu qaaday isagoo raadinayay bisad ka dhuntay